Jijjiiramni dhibee edsiirratti mul’ate balaa tiraafikii hir’isuurrattis irra deebi'uu qaba
Jijjiiramni dhibee edsiirratti mul’ate balaa tiraafikii hir’isuurrattis irra deebi'uu qaba Featured
Obbo Kaasahuun Haaylamaariyaam
Baroota dheeraaf dhibeen 'HIV'/ Edsiin dawaa dhabuurraa kan ka’e dhumaatii lubbuu namoota hedduuf sababa ta’uurra darbee kufaatii dinagdee guddaa qaqqabsiisaa turus tattaaffii ittifufiinsaan taasifameen baay'ina lammiilee dhibichaan qabamanii gadi buusuurratti jijjiiramni mul'ateera.
Haaluma walfakkaatuunis balaa tiraafikii lubbuu namaa galaafataafi qabeenya barbadeessaa jiru hir'isuufi dhawaataanis dhabamsiisuuf akkuma kan 'HIV'/edsii xiyyeeffannaan irratti hojjetamuu akka qabuudha haalli jiru kan agarsiisu.
Balaa tiraafikii qaqqabaa jiru gadi buusuu keessatti gurmaa'inni dargaggootaafi miidhamtoota qaamaa murteessaa ta’ee waan argameef tibbuma kana Abbaan Taayitaa Geejjibaa Federaalaa mariilee hubannoo uumuu geggeessaa jira.
Waltajjii marii qaamolee irranatti eeraman hirmaachisuun dhiyeenya kana Finfinneetti taa'amerratti, miidhamtootni qaamaafi dargaggoonni biyyattii dhibee edsiin olitti balaa tiraafikitiin miidhamaa jiraachuu kan eeran Daariktara Olaanaa Abbaa Taayitaa Geejjibaa Federaalaa Obbo Kaasaahun Haaylamaariyaami.
Dur sodaan lammiilee keessa jiru dhibee edsii ture kan jedhan daariktarichi yeroo ammaa garuu lubbuun namaa balaa tiraafikiitiin darbaa jiruufi qabeenyi barbadaa'aa jiru kan 'HIV' olitti yaachisaa ta'uu eeru.
Keessumaa dargaggootni humna egeree biyyittii ta’an balaa kanaan daran miidhamaa jiraachuu eeruun hojiin hubannoo uumuufi dadammaqiinsaa akkuma kan 'HIV'/edsiiirratti xiyyeeffannaa argachuu akka qabu dubbatu.
Akka Itoophiyaatti balaawwan tiraafikii wajjin walqabatanii guyyaa guyyaatti galmaa'aa jiran haala yaaddessaarra gahuu kan dubbatan Obbo Kaasaahun, mala biyyoonni guddatan balicha hir’isuuf fayyadaman ka'umsa godhatanii socho'uun murteessaa ta'uus ni himu.
Biyyoonni guddatan tokko tokko gaaga’ama balichaan dhufu xiqqeessuuf dargaggoota akkasumas miidhamtoota qaamaa akkaataa gurmaa'insa isaaniin walitti fiduun hojii hubannoo uumuu hojjetaniin jijjiirama qabatamaa galmeessisuu danda'uusaaniis ni eeru.
Itoophiyaanis rakkoo hamaa balaa tiraafikitiin galmaa'aa jiru gadi buusuuf mala armaan oliitti fayyadamuu qabdi kan jedhan Obbo Kaasaahun, ta’uu baannaan haalli fuulduraa biyyittii yaaddessaa ta'uu ibsu.
Akkuma, “Osoo goondaan hindhufiin daaraa sararatu” jedhamu san hojii hubannoo uumuufi karaa gurmaa'ina qabuun taasifamuun lammii balaa tiraafikii jalaa baraaruun barbaachisaadha jedhu.
Sochii ammaan tana balicha hir'isuuf bifa duulaatiin taasifamaa jiru milkeessuufis caasaan oggansaa gaaraa hanga dakaatti jiru kutattummaafi xiyyeeffannaan hojjechuun dhimmichaaf bu'uura kaa'uu akka ta'e ni addeessu.
Balichi daran akka hammaatuuf sababa kanneen ta’an keessaa rakkoo gahumsa konkolaachisaa, dhugaatii alkoolii, hayyama konkolaachisummaa karaa qaxxaamuraatiin kennamu, haalli ittifayyadama daandii lafoofi kkfn kan eeraman ta'uus daarektarichi ni dubbatu. Dhimmoota kanneen karaa qabsiisuufis hordoffiifi to'annoon walirraa hincinne taasifamuu akka qabus ni eeru.
Yaada ka’umsaa kana jajjabeessuufis hojiin hubannoo uumuu qaamota dhimmisaa ilaallatu bakka bu’oota dargaggootaa, miidhamtoota qaamaafi miidiyaalee wajjin qindoominaan hojjetamaa akka jirus Obbo Kaasaahun ni addeessu.
Kun ta’us ega balaan konkolaataa qaqqabeen booda miidhaan lubbuufi qabeenyarra gahu olaanaa waan ta’eef beenyaa barbaachisaan si'aayinaan kaffalamuu akka qabu kan dubbatan ammoo Daariktara Dhimma Seeraa Ejensii Bulchiinsa Fandii Inshuraansii Itoophiyaa, Obbo Hasan Mohaammadi.
Konkolaatonni biyyittiitti tajaajila kennan marti haguuggii inshuraansii qabaachuu akka malanis ni eeru. Konkolaattonni inshuraansiin hingalamneef biyyittii keessa socho'uun dhorkaadha jedhu.
Walumaagalatti balaa kanaaf saaxilamanii du’uurra ykn yaalamaa hafuurra dursa hojii hubannoo uumuu karaa gurmaa’een taasisuun dargaggoota humna egeree biyyaa ta’an baraaruun murteessaa waan ta'eef dhimma kanarratti irreefi qalbii tokkoon duuluun murteessaadha.
Torban kana/This_Week 7914
Guyyaa mara/All_Days 1292425